कति शवहरुलाई उनले आँशु पुछ्दै दागबत्ती दिइन् । हामी नेपालीले राम्रा मान्छे चिन्ने भनेकै बिदेशीले चिनाईदिए पछि न हो ? - Enepalese.com
कति शवहरुलाई उनले आँशु पुछ्दै दागबत्ती दिइन् । हामी नेपालीले राम्रा मान्छे चिन्ने भनेकै बिदेशीले चिनाईदिए पछि न हो ?
इनेप्लिज २०७७ मंसिर १० गते ११:२९ मा प्रकाशित
काम नगरी रात दिन खुरापात, अन्ठसन्ठबाजी, मिडियाबाजी र फेसबुक बाजीबाट भाइरल हुने भाइरस प्रवृति प्रति दया जागेर आयो ! खै यिनलाई मृत्यु पछि पनि खान, पद प्रतिष्ठा राख्न गर्न परेको हो कि किन हो खोक्रो आडम्बरमा मरिहत्ते ? हामी नेपालीले राम्रा मान्छे चिन्ने भनेकै बिदेशीले चिनाईदिए पछि न हो ?